Ungachinja sei zita remakomputa muLinux kubva kune iyo terminal | Linux Vakapindwa muropa
Chero ani mushandisi akaisa Linux pakombuta yavo anenge aona nhanho yatinosarudza zita redu rekushandisa, password uye zita remakomputa. Nekukanganisa, akawanda maLinux anoparadzira mazita muchina "Username" - "PC-Model", iyo inogona kuturikirwa se "pablinux-Aspire-One-MODEL". Ini pachangu, handisati ndambofarira iro zita uye mune ino nhanho ndinochichinjira kune rimwe. Kana, chero chikonzero, isu tichida chinja zita rechikwata Mushure mekushandisa sisitimu yekuisa, mazhinji ekuparadzira kweLinux haana chero sarudzo dziripo mumasethingi.
Sezvinenge nguva zhinji nezvose zvinenge zviri muLinux, tinogona kuzviita na pakati pekupedzisira. Kusiyana nedzimwe shanduko senge username, chinja zita rechikwata, iro rinozivikanwa se hostname, ndechimwe chinhu chiri nyore uye chakachengeteka zvachose. Uchazongofanira kuita shanduko mbiri dzakakamurwa kuita nhanho dzinoverengeka dzatinotsanangura pazasi.
1 Kuchinja zita reboka kwakachengeteka zvachose
2 Iine nmcli
Kuchinja zita reboka kwakachengeteka zvachose
Chinhu chekutanga chatichaita kuvhura iyo terminal, chimwe chinhu chatinogona kuita nenzira ipfupi Ctrl + Alt + T mune akawanda Linux kugoverwa.
Isu tinosuma unotevera kuraira, uko kwatichafanirwa kushandura «newname» kune iro zita ratiri kuda kushandisa:
Tevere, tinonyora zvinotevera uye tinyore password yemushandisi wedu:
Izvo zviri pamusoro zvichavhura mupepeti wedu mauto. Ikoko tinofanirwa kushandura zita rechikwata chedu uye nekuisa nyowani. Tinogona kufamba kuburikidza nemupepeti nemakiyi ekupururudza ePC yedu.
Kana tango shandurwa, tinodzvanya Ctrl + O kuchengetedza uye Pinda kuti usimbise shanduko.
Pakupedzisira, tinobuda neCtrl + X.
Panguva ipi neipi mukuita kwacho tichaona chero shanduko. Kuzviona, zvakanakisa zvatinogona kuita restart terminal, panguva iyoyo tichaona zita remushandisi wedu, chiratidzo uye zita idzva reboka. Ini ndaimboshandisa zita rimwechete nemushandisi, asi hazvina kundigutsa. Iye zvino ndasarudza kuisa iyo vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu yandiri kushandisa, mune ino kesi K (ubuntu) 1904. Izvo zvakakosha kutaura kuti kana isu tikaisa iyo poindi, inongogamuchira chete chikamu chekutanga, icho mune uyu muenzaniso chingave "19".
Kana nzira iri pamusoro isingashande kwatiri, tinogona zvakare kushandisa rairo nmcli. Nemurairo unotevera tichaona iro zita rizere remidziyo:
Kuti tishandure zita rechikwata, isu tinowedzera zita idzva kumurairo wekare, uyo mumuenzaniso wangu ungaratidzika seizvi:
nmcli general hostname K1904
Ichi chidzidzo chidiki chekuti ungachinja sei zita remuchina muLinux chakakubatsira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ungachinja sei zita remuchina muLinux kubva kune iyo terminal
sezvazviri zvisingawanzoonekwa: kongiri, inoshanda uye pamusoro pezvose: inoshanda.
Iyi dzidziso ndiyo yakanakisa, kwete chete iyo yakandidzidzisa maitiro ekushandura zita remubati, asiwo maitiro ekunyora magwaro akajeka, kuburikidza nano raira, ndatenda zvikuru.
rwizi rwizi akadaro
Mhoro, ipa ne:
sudo hostname nyowani zita
Izvi zvakachinja zita rinowoneka mushure me @ mune terminal, asi zita rechikwata rakaramba risina kuchinja. Zvakare, mushure mekutanga kwepc, iyo terminal yaizodzokera kuzita rimwe chete.
Ipapo ndakaedza na
nmcli general hostname zita remudunhu
uye izvi zvakandishandira.
Pindura kune riber
Hongu! ! !
Sarudzo yechipiri yakandishandira
Louis mtz akadaro
Maitiro ekutanga haana kundishandira, asi yechipiri nzira ine nmcli kana yaindishandira parizvino ndinoshandisa KDE neon uye kana mumwe munhu achida kuziva kuzviita mune iyo distro shandisa yechipiri
Pindura kuna Luis Mtz
Fedora 28 inosvika kumagumo ehupenyu hwayo kutenderera. Simudzira izvozvi